‘भारतले अहिले नै कोशी ब्यारेजको अरु ढोका पनि बन्द गर्यो भने पनि पानीको सहत बढेर पुल माथीबाट पानी बग्छ, तर पुल भत्किदैन’ हेर्नुस … – Nepal's Digital Newspaper
‘भारतले अहिले नै कोशी ब्यारेजको अरु ढोका पनि बन्द गर्यो भने पनि पानीको सहत बढेर पुल माथीबाट पानी बग्छ, तर पुल भत्किदैन’ हेर्नुस …
August 13, 2017 nepsnews0Comments
साउन २९ । कोशी ब्यारेजको ढोका खोल्न कुटनीतिक पहल गरेको खबर शनिबार साँझ फैलियो । परराष्ट्रमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पनि भारतसँग कुटनीतिक सम्पर्क गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । कोशी ब्यारेज नेपाली भूमिमा छ । तर चाबी भारतको हातमा छ । यसकारण भारतले ढोका नखोलेर नेपाल डुबाउँदैछ भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।
खासमा शनिबार कोशीमा पानी २ लाख ८० हजार क्यूसेक थियो । आज आइतबार पानीको सतह घटेर २ लाख ४९ हजार पुगिसकेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख विद्यानन्द माझीले जानकारी दिए । पानी जति सुकै भए पनि कोशी ब्यारेजबाट गाडी चलाउन सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन यो पुल यति धेरै बलियो गरी बनाइएको छ कि भारतले अहिले नै अरु ढोका पनि बन्द गर्यो भने पनि पानीको सहत बढेर पुल माथीबाट पानी बग्छ । तर पुल भत्किदैन ।
तर ढोका थुनेर नेपालतिर पानी धेरै जम्मा गरियो भने ६४ सालमा जस्तै कोशीको तटबन्ध भत्किन सक्छ । त्यस्तो हुँदा नेपालमा त क्षति अवश्यम्भावी हुन्छ, बिहारको त काल नै बनेर कोशी उर्लिन्छ । कोशी ब्यारेजको ढोका भारतले चाहेर पनि बन्द गर्न सक्दैन । अर्का कुरा कोशी ब्यारेज नेपाली भूमिमा भए पनि त्यहाँबाट २–३ सय मिटर दक्षिणबाटै भारत सुरु हुन्छ । अर्थात सीमैमा छ कोशीको पुल ।
राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर कोशीको रेगुलेसन भारतलाई दिइयो भनेर अहिले धेरै आलोचना भइरहेको छ । खासमा अहिलेको डुबान कोशी ब्यारेजका कारण भएको होइन । अविरल वर्षाका कारण डुबान भएको हो ।साभार – नेपालआजबाट
← पहिरोमा परि एउटै घरका ७ जनाको ज्यान गयो ….
बाढी प्रभावित निर्देशक दिपाश्री निरौलाले गरिन सहयोग .. →
मेरी आमा यौन कर्मी भएर के भो ? उहाको छोरी हुन पाउनुमा नै मलाई गर्व छ…
August 19, 2017 nepsnews 0
एकै परिवारका बुबा, आमा, छोरा र छोरी मृत फेला
July 22, 2017 nepsnews Comments Off on एकै परिवारका बुबा, आमा, छोरा र छोरी मृत फेला
तस्करसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रहरी निरीक्षक कारवाहीमा